EVY's Kitchen: Nyonya ကောက်ညှင်းထုပ်
အုန်းနို့နံ့သင်းတဲ့ Nyonya ကောက်ညှင်းပေါင်းဟာလည်း မနက်စာအတွက်သင့်တော်မယ့် မုန့်လေးတစ်ခုပါပဲ။ ပုဇွန်ကို အဆာအဖြစ်ထည့်ထားပြီး အနံ့မွှေးမွှေးလေးနဲ့ စားလို့ကောင်းလှပါတယ်။
ကောက်ညှင်းဆန် ၃၀၀ ဂရမ်
အုန်းနို့ ၁၃၅ ဂရမ်
ပုဇွန် ၁၅၀ ဂရမ်
ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်း
ဦးစွာ ကောက်ညှင်းဆန်ကို တစ်ညရေစိမ်ပြီး အုန်းနို့ဆမ်းကပေါင်းပါ။
ကြက်သွန်များကိုဆီသတ်ပြီး ပုဇွန်၊ ပုဇွန်ခြောက်များကိုထည့်မွှေပါ
အုန်းသီးနှု့် ငရုပ်ကြမ်းမှုန့်ကိုလည်း ထည့်မွှေပေးပြီး ဆားလက်ဖက်ရည် ၁ ဇွန်း၊ သကြားလက်ဖက်ရည် ဇွန်းတစ်ဝက်ထည့်မွှေကာ မီးပိတ်လိုက်ပါ
ငှုက်ပျောရွက်ကို မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်နှင့် ၁ မိနစ်ခန့်အပူပေးပါ
အရွယ်တော်များဖြတ်ကာ ကောက်ညှင်းပေါင်း စားပွဲဇွန်း တစ်ဇွန်းခွဲခန့်ထည့်ပါ။
ပုဇွန်အဆာများကိုအလယ်မှာထည့်ကာ အပေါ်မှကောက်ညှင်းပေါင်းစားပွဲဇွန်း တစ်ဇွန်းခန့်ထပ်ထည့်ပြီး ကောက်ညှင်းထုပ်ထုပ်ပေးပါ။
စားကာနီးမှ ငှက်ပျောရွက်များ အညိုရောင်သမ်းအောင် မီးပေါ်မှာ ခဏကင်ပေးပါ။
ငှက်ပျောဖက်နံ့သင်းသင်းနဲ့ Nyonya ကောက်ညှင်းထုပ် အသင့်ဖြစ်ပါပြီ
Posted by Evy at 12:06 PM
Labels: Cooking, seafood, သရေစာ
အဲဒါလေးလဲ ကြိုက်တယ်။ မအိ လုပ်ပြတဲ.နည်းဖတ်ပီးတော.မှ ထင်ထားတာထက် ပိုလွယ်တယ်လို. သိသွားတယ်။ ကင်ရမဲ. မီးဖုို ရှိလာခဲ.ရင် ကိုယ်တုိုင်လုပ်စားကြည်.မယ်။ :)
အမ ရဲ့ ချက်နည်းတွေထဲမှာ nyonya ဆိုတဲ့စာလုံးအမြဲပါတယ်.. အဲဒါ ဘာကိုခေါ်တာလဲဟင်
Nyonya ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို FOOD Magazine 2013 Sep Issue မှာပြောပြထားတာလေး ပြန်ကူးပေးလိုက်တယ် ညီမရေ
ဒီလတွက်မျှဝေပေးမယ့် ဟင်းလျာတွေကတော့ Nyonya ဟင်းလျာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အုန်းနို့ကို အများဆုံး အသုံးပြုပြီး ဗမာ့ဟင်းလျာတစ်ချို့နဲ့ နီးစပ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Nyonya အကြောင်းအနည်းငယ်ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ Peranakan Chinese လို့ခေါ်တဲ့ တရုပ်လူမျိုးတွေပါပဲ။ ၁၅ နဲ့ ၁၆ ရာစုမှာ တရုပ်လူမျိုးများ အင်ဒိုနီးရှားကိုရောက်လာပြီး ဒေသခံအမျိုးသမီးများနဲ့ လက်ဆက်ကာ မွေးဖွားလာသော မျိုးဆက်များကို Peranankan Chinese ဟုသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အမျိုးသားများကို “BaBa (ဘာဘား)” ဟုခေါ်ဆိုကာ အမျိုးသမီးများကို “Nyonya (ညိုညာ)”ဟုခေါ်ကြပါတယ်။ ထူးခြားချက်ကတော့ ဒီတရုပ်မျိုးနွယ်စုများဟာ ကိုးကွယ်ရာဘာသာရေးကိုတော့ မူလတရုပ်အယူကိုယူပြီး၊ ဘာသာစကားကတော့ မလေးဘာသာစကားနဲ့ တရုပ်စကားရောထားသော Baba Malay လို့ခေါ်တဲ့ သူတို့ရဲ့သီးသန့်ဘာသာစကားသုံးခြင်းပါပဲ။ ဒါ့အပြင် ရိုးးရာအ၀တ်အစားကလည်း မလေးအ၀တ်အစားကိုမှီပြီး ခွဲထွက်ထားသော အ၀တ်အစားဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးဆန်းတာကတော့ ဟင်းလျာတွေပါ။ မလေးနဲ့ တရုပ်ကိုပေါင်းစပ်ထားသော ဟင်းလျာများကို ရိုးရာဟင်းလျာများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်းပါပဲ။ အဲဒီဟင်းများကို Peranankan Dishes (သို့) Nyonya Dishes လို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။
thanks ama yay..
BoBoChaCha - Nyonya Dessert
Ondeh Ondeh (Nyonya အချိုပွဲ)
Chicken Sioh ( Nyonya စတိုင်ကြက်သားဟင်း)